Hermaan Koon, itti aanaa ministera haajaa biyya-alaa Ameerikaa duraanii Itoophiyaan filannoo bilisaafi madaalwaa geggeessuu qabdi jedha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Hermaan Koon, itti aanaa ministera haajaa biyya-alaa Ameerikaa duraanii Itoophiyaan filannoo bilisaafi...
Hermaan Koon, itti aanaa ministera haajaa biyya-alaa Ameerikaa duraanii Itoophiyaan filannoo bilisaafi madaalwaa geggeessuu qabdi jedha
Itoophiyatti filannoon biyyoolessaa geggeeffamuuf dema; bara 2015 keessa. Waa’ee filannoo dhufuu irraa kan gaafatame itti aanaa Ministera Haajaa Biyya-alaa Ameerikaa duraanii kana ture, Hermaan Koon, Itoophiyaan filannoo dhufaa jiru wolbaafi madaalawaa godhuu akkasumas presii wolaba taasisuu irraa qaanfachuu ykn duubatti jechuu hinqabdu jedha.
Akka amantaa Hermaan Koonitti, mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti waan gaggaarii filannoo injifachuu isa dandessisu hojjataara. Kanaafuu filannoo dhufuu jiru wolaba taasisuu qaba. Garuu, mootummaan biyyattii gorsa isaa fudhachuufi hujitti jijjiiruuf sochiin godhe tokkos kan hinjirre ta’uus ibseera.
‘Akka amantaa kootti, Itoophiyaan daran gara dimokraasii paartii danuutti tankaarfachuu qabdi. Ammatti garuu, paartilee mormitootaa ummataan wolqunnamtii hinqabnetu jira. Preesiin sagalee isaaniif hinkennu. Gaazexeessittoonni waan mootummaan hinfeene gabaasan taanaan nihidhamu. Mootummaan, akka natti fakkaatutti, haala jiru fooyyessuu qaba waan bayeessa hojjataara waan ta’eef,’ jedheera Hermaan Koon.
Waa’ee Asabii irrattis, bara 1991 marii Landan keessatti geggeeffame irratti Asab tan Itoophiyaati akka hinjenne dubbatee, garuu Itoophiyaan Asabitti fayyadamuu akka qabdus yaadaafi gorsa kennuu isaa hime. Asab tan Eertiraati. Itoophiyaan, garuu, mirga itti fayyadamuu qabdi akka amantaa Hermaan Koonitti.
Hermaan Koon bara 1991 marii araaraa mootummaa Dargii, OLF, TPLF fi EPLF jiddutti Landan irratti geggeffame kan hooggane ture. VOA News
marii araaraa 1991
Previous articleSadarkaa addunyaatti duuti sababa dhibee daddarbaan dhufu gadi bu’e; umriinis 65.3 gara 71.5 ol ka’e
Next articleDawaan Ibuprofen jedhamu umrii namaa hamma woggaa 10iin dheeressuu nimala jedhame